लक्षणसहितका सङ्क्रमित बढे — donnews.com
१फेवातालको तोकियो चार किल्ला
२व्यङ्ग्यचित्र पत्रकारिताबाट राजनीतिलाई खबरदारी गर्न आग्रह
३‘नेकपाको कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा बनेको छैन’
४सलिङ्गे महिला चेतना समूहमा नयाँ नेतृत्व
५‘एकीकृत जनक्रान्तिमा सुरक्षा निकायका हतियार दलालतिर सोझिने छन्’
६सरकार परिवर्तन हुँदैन : प्रवक्ता गुरुङ
७धार्मिक पर्यटनका धेरै सम्भावना बोक्दै आँधिमूल
८सहिद, घाईते तथा वेपत्ता परिवारलाई सम्मान
९परीक्षा उत्तीर्ण भएको महिना दिनमा चालक अनुमतिपत्र पाइने
१०अनुदानको रकम हत्याउन फर्जी किसानहरुको होडबाजी
११कांग्रेस नेता जोशीलाई मस्तिष्काघात
१२प्रतिबन्धित नेकपाका मुस्ताङ जिल्ला इञ्चार्ज फिल्टर पक्राउ
१अखिल क्रान्तिकारी पृथ्वीनारायण क्याम्पसको अध्यक्षमा उपेन्द्र
२सहिदको बलिदानलाई खेरजान दिदैंनौंः अखिल क्रान्तिकारी
३छात्रालाई होटलमा लगेर परीक्षा लिने क्रममा जबरजस्ती करणीको प्रयास गर्ने शिक्षक शिरिष जेल चलान
४दाजुभाइकै निर्मम तरिकाले हत्या गर्नेलाई पनि आममाफी !
५सर्वोच्चमा चार पूर्वन्यायाधीशद्वारा लिखित जवाफ पेश
६‘खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार प्राथमिकतामा’
७देखिन थाले दैलेखमा लोपोन्मुख गिद्ध
८एमिकस क्युरीको राय दिनेक्रम जारी
९मनाङमा आगो अझै नियन्त्रण बाहिर
१०पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि
११‘बल्ल भेटियो हाम्रो पहिचान’
१२भन तिमी कहाँ छौं ? हामी यहाँ छौं ?
लक्षणसहितका सङ्क्रमित बढे
बागलुङ । केही अघिसम्म जिल्लामा लक्षण भएका कोरोना सङ्क्रमित फाटफुट्ट भेटिन्थे त्यो पनि हल्का लक्षण देखिएको अवस्थामा । सामान्य हेरचाह र औषधिले नै उनीहरु निको हुन्थे । कतिपयमा केही दिनमै लक्षण आफै हराएर जान्थ्यो । लक्षण बिनाका सङ्क्रमित हुँदा आइसोलेसनकक्षमा पनि व्यवस्थापन र उपचारको भार कम थियो । चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीले नियमित निगरानी गरे पुग्थ्यो । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । लक्षणसहितका सङ्क्रमित भेटिन थालेपछि एकातिर अस्पतालमा चाप बढ्दो छ । अर्कातिर समुदायमा सङ्क्रमण तीव्र हुने हो की भन्ने चिन्ता । धवलागिरि अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक शैलेन्द्र विक पोखरेलले केही सातायता लक्षणसहितका सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढीरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कडा लक्षण देखिएका कतिपयमा अस्पताल भर्ना भएपछि मात्र कोरोना पुष्टि हुने गरको छ ।
“आइसोलेसनमा रहनुभएका चार÷पाँच जनालाई अहिले पनि आवश्यकता अनुसार अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था छ, मध्यम र हल्का लक्षण भएकालाई सामान्य औषधि चलाइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । यसअघि सघन उपचार कक्ष (आईसियू) मा राखेर एक जना सङ्क्रमितको उपचार गरिएकामा अहिले अवस्था सुधार छ ।
आजै मात्र भेन्टिलेटरमा उपचाररत बागलुङ नगरपालिका–३ का ६६ वर्षीयको अस्पतालमा निधन भएको थियो । स्वास्थ्य स्थिति जटिल बनेपछि उहाँलाई एकसातादेखि सघन उपचारमा राखिएको थियो । “अस्पताल आउँदा नै उहाँको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनीसकेको थियो, अथक प्रयास गर्दा पनि बचाउन सकिएन”, प्रमुख चिकित्सक पोखेरलले भन्नुभयो । सङ्क्रमित अस्पताल भर्ना नहुँदै फोक्सोले राम्रोसँग काम गर्न छाडिसकेको उहाँको भनाइ छ । अस्पतालको आइसोलेसनकक्षमा अहिले दश जना सङ्क्रमित उपचाररत छन् ।
बागलुङ नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामप्रसाद खनालले शङ्कास्पद लक्षण देखिएर पनि समस्या लुकाउने, कोरोना नजाँच्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो । “बागलुङ बजारमा अहिले पत्ता लागेका भन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएको हाम्रो अनुमान छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिरामी भएर पनि घरमै बस्ने, रोग लुकाउने गरेको भेटिएको छ, कपितयले पोखरा, काठमाडौँ गएर उपचार गराइरहनुभएको छ ।” उहाँले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भएकाले सबैले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । लक्षण देखिएमा र कोरोना भएको शङ्का लागेमा घरमै आइसोलेसनमा बस्ने र कोरोना नजाँची बाहिर ननिस्कन जनसाधारणलाई आग्रह गर्नुभयो । अधिकृत खनालका अनुसार सदरमुकाममा मात्र अहिले ३० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् ।
प्रमुख चिकित्सक पोखरेलले कोरोनाको लक्षण देखिएमा तुरुन्त अस्पताल या स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो । “अहिले कडा खालको भाइरस देखा परेको छ, यसले लक्षण पनि निम्त्याउँछ, स्वास्थ्य जटिल बनाउन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो । गम्भीर लक्षण भएका सङ्क्रमित थपिदैँ जाने हो भने अस्पतालले नै धान्न नसक्ने स्थिति छ । धवलागिरि अस्पतालमा जम्मा तीन शय्याको सघन उपचार कक्ष (आईसियू) र दुई वटा भेन्टिलेटर छन् । स्थानीय तहमा भएका आइसोलेसनकक्षमा लक्षणविहीन सङ्क्रमितलाई मात्र राख्ने गरिएको छ । जटिल अवस्थाको बिरामीलाई सदरमुकामकै अस्पतालमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रमुख चिकित्सक पोखरेलले महामारी रोकथामका लागि हरेक व्यक्ति जिम्वेवार हुनुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“हामीले लापरवाही ग¥र्यौँ भने स्थिति भयावह हुन बेर लाग्दैन, सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाऔँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ, आवश्यक नपरी घरबाहिर नजाऔँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना सामान्य हो, केही हुँदैन भन्ने भ्रमबाट मुक्त होऔँ ।” स्वास्थ्य कार्यालयले पनि नागरिक सचेतनाका लागि ‘कोरोना महामारी, मेरो जिम्वेवारी’ अभियान थालेको छ ।
अभियानमार्फत हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो परिवार, आफन्त र साथीभाइलाई जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनासम्बन्धी सपथ खुवाउन प्रेरित गरिने कार्यालयका प्रमुख सुरज गुरौले बताउनुभयो । “मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले हातधुने, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा व्यक्ति आफैसँग प्रतिवद्ध होस् भनेर सचेतनाको अभियान थालेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यालयका अनुसारमा जिल्लामा अहिले १३२ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् । कुल सङ्क्रमितमध्ये ५५६ जना निको भइसकेका छन् । पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म झण्डै दश हजारमा कारोना जाँच गरिएकामा ८५ प्रतिशत पुरुष र १५ प्रतिशत महिलामा सङ्क्रमण देखिएको छ ।
‘पुनःस्थापना भए तमासाको राजनीति शुरु हुन्छ’
कपिल सापकोटाको शब्द संगीतमा ‘छम छमी’